धनुषा झडप: प्रहरीले चलायो रबरको गोली, १३ जना घाइते
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच धनुषाको पोर्ताहामा झडप भएको छ। झडपका क्रममा प्रहरी सहित १३ जना घाइते भएका छन्।
सीके राउतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप, ६ जना घाइते
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आह्वान गरेको चक्काजामका क्रममा धनुषामा झडप भएको छ। झडपमा प्रहरी सहित ६ जना घाइते भएका छन्।
किन अराजक बन्दै छन् सीके राउत?
स्थानीय बासिन्दामाझ जनमत पार्टीको रवाफ बढाउन कार्यकर्ताहरू स्थानीय तहका अनियमितता र ढिलासुस्तीका विषय समातेर कानून विपरीत गतिविधि गर्दै छन्।
सर्लाहीमा पनि लगाइयो कर्फ्यू प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट युवकको मृत्यु भएपछि सर्लाहीमा तनाव उत्पन्न भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी गरेको छ।
प्रदेश २ को नामकरण गर्न चार प्रस्ताव पेश प्रदेश २ को नामकरणका लागि प्रदेश सभामा चार वटा प्रस्ताव पेश गरिएका छन्।
एमसीसी छिटै संसद्‌बाट पारित हुन्छ : गृहमन्त्री खाँण नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी छिटै संसद्बाट पारित हुने बताएका छन्।
शिक्षकले नै गरे विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयमा शिक्षकले नै तालाबन्दी गरेका छन्।
कहाँ चुके विमलेन्द्र निधि? तराई-मधेशका जिल्लामा व्यापाक जनाधार रहेको बताउँदै आएका विमलेन्द्र निधि सभापतिका पाँच उम्मेदवारमध्ये चौथो स्थानमै सीमित भए, किन?
डा. महतो कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त डा. वैद्यनाथ महतो प्रदेश २ सरकारले स्थापना गरेको कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका छन्।
जनकपुरधाममा सम्धी मिलन (तस्वीरहरू) राम-सीताको विवाहको सम्झनामा जनकपुरमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत चौथो दिन सम्धी मिलन अर्थात् तिलकोत्सव मनाइएको छ।
कांग्रेस प्रदेश २ को अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
अपहरण गरेर प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै मतदान अधिकृतले दिए राजीनामा
नेपाली कांग्रेस वीरेन्द्र रमण
नेपाली कांंग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश २ मा प्रतिनिधि छनोट गर्दा अपहरण गरेर प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै मतदान अधिकृतले राजीनामा दिएका छन्। जसले गर्दा प्रदेश २ को अधिवेशन अवरुद्ध भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश २ को निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धामा प्रभु साह र रघुवीर महासेठ नेकपा (एमाले)को १०औं महाधिवेशनमा प्रदेश २ बाट प्रभु साह र रघुवीर महासेठ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन लागेका छन्।
जसपाले गर्‍यो सांसद प्रदीप यादवलाई कारबाही जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप यादवलाई अनुशासनको कारबाही गरेको छ।
निधि निकट यादवले गरे प्रदेश २ को सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश २ को सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
‘मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ’ ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान र साइकल प्रकरणमा अख्तियारले अनियमितता देखाइसकेकाले मुख्यमन्त्रीको अनुहार लिएर चुनावमा जान सकिने अवस्था छैन।’
एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन वनमन्त्री राय बर्खास्त प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री राम नरेश रायलाई बर्खास्त गरिएको छ।
प्रदेश २ मा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मन्त्रीलाई हटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ (तस्वीरहरू) अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मिथिलाञ्चल लगायत देशभर छठ पर्व मनाइएको छ।
मिथिलाञ्चलमा छठको उल्लास मिथिलाञ्चलमा छठको उल्लास छाएको छ। छठको पूजाका लागि यहाँका पोखरी झकिझकाउ पारिएका छन्।